Duolingo အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（35.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Duolingo: Learn Languages Free
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးပညာရေးအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကိုလေ့လာပါ။ Duolingo သည် Quick, bite အရွယ်ရှိသောသင်ခန်းစာများမှတစ်ဆင့်ဘာသာစကား 35 မျိုးကိုသင်ယူရန်အတွက်ပျော်စရာကောင်းပြီးအခမဲ့ app ဖြစ်သည်။ သင်၏ဝေါဟာရနှင့်သဒ္ဒါစွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်ရန်စကားပြောခြင်း, ဖတ်ခြင်း, နားထောင်ခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းနှင့်ချီသောသင်ယူသူသန်းပေါင်းများစွာသောကျောင်းသားများအားချစ်မြတ်နိုးသူများအားချစ်မြတ်နိုးသည်။ Duolingo သည်စပိန်, ပြင်သစ်, တရုတ်, ဂျာမန်, ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်တကယ့်စကားစမြည်ဝိုင်းများကိုကြိုတင်ပြောဆိုရန်ကူညီသည်။
သင်သည်ခရီးသွားခြင်း, ကျောင်း, အလုပ်ရှာဖွေရေး, မိသားစုများ, သူငယ်ချင်းများ, သူငယ်ချင်းများ, သင်၏ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးအတွက်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းကိုသင်လေ့လာနေသည်။ Br>
ဘာကြောင့် Duolingo? ဂိမ်းကဲ့သို့သောသင်ခန်းစာများနှင့်ပျော်စရာဇာတ်ကောင်များသည်ခိုင်မာသောစကားပြောခြင်း, စာဖတ်ခြင်း, နားထောင်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းစွမ်းရည်များတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။
★ duolingo အလုပ်လုပ်သည်။ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူများကဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း, Duolingo တွင်သိပ္ပံဆိုင်ရာသင်ကြားရေးနည်းစနစ်များရှိပြီးရေရှည်ဘာသာစကားပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်သိပ္ပံဆိုင်ရာသင်ကြားရေးနည်းစနစ်များရှိသည်။
★ရပ်ရွာသို့ဝင်ရောက်ရန်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်း 300 ရှိသောသင်ယူသူ 300 နှင့်အတူ, သင်သည် duolingo မှဘာသာစကားအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
★ဘာသာစကားတိုင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ စပိန်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အီတလီ, ရုရှား, တူရကီ, တူရကီ, အိုင်းရစ်, ဆွီဒင်, esperanto, esperanto, အင်္ဂလိပ်, ဟာဝပ်, ဟာဝပ်, ကိုရီးယား, ဂျပန်, အင်္ဂလိပ်နှင့်မြင့်မြတ် Valyrian ပင်!
app ကိုသုံးပါ။ " - Wall Street ဂျာနယ်
"ဒီအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်0က်ဘ်ဆိုက်သည်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သမျှအထိရောက်ဆုံးသောဘာသာစကားသင်ကြားနည်းများထဲတွင်ပါ0င်သည်။ သင်ခန်းစာများသည်စိန်ခေါ်မှုများအတိုချုပ်, ဘာသာပြန်ထားသောမေးခွန်းများ - ရွေးချယ်ခြင်း, ဒါကငါ့ကိုပိုပြီးပြန်လာဖို့ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်။ " - New York Times
"Duolingo သည်ပညာရေး၏အနာဂတ်အတွက်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကိုင်ထားနိုင်သည်" - Time မဂ္ဂဇင်း
Duolingo သည်ရွှင်လန်းဖွယ်, ပေါ့ပါးပြီးပျော်စရာကောင်းသည် ... "- Forbes
Duolingo ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက Duolingo Plus အား7ရက်အခမဲ့ရယူပါ။ ကြော်ငြာများမရှိပါ သင်သွားလေရာရာတွင်သင်မည်မျှလေ့လာသင်ယူနိုင်သည့်သင်ကြားပို့ချမှုများကိုတိုင်းတာသည်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သောသင်တန်းများကိုတိုင်းတာသည်ကိုတိုင်းတာရန်ကျွမ်းကျင်မှုဉာဏ်စမ်းပဟေ breaks ိ
[email protected] သို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်များပေးပို့ပါ။
Duolingo ကိုအသုံးပြုပါ https://www.duolingo.com တွင် web
0 န်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ - https://www.duolingo.com/terms
ဘာအသစ်လဲ Duolingo: Learn Languages Free 5.25.3
Duolingo learn languages free in 2021 [duolingo language]
Duolingo plus | best app learning language English or any language free download Duolingo apk mod
Duolingo: Learn Languages Free 5.23.4
It's amazing. It's so easy to use. Please add Myanmar (Burma) language..
Min Shi Yoon